ဧရာညီနောင်: Windows Xp Cyber Xtreme (2010)
Windows Xp Cyber Xtreme (2010)
တော့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်မပြန်ခင်လေးပို့စ်တွေတင်ပေးအုံးမယ်နော်......။ ဒီနေ့တော့ Win Xp Cyber Xtreme ကို new theme, wallpaper, system icons, wallpapers အားလုံးပါတဲ့ အခွေလေးတစ်ခွေတင်ပေးလိုက်တယ်နော် အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုကပါတယ်ဗျာ...း)
1. Unrar and burn with Nero or UltraISO
2. Intergated license key.
VistaVG Black [default] VistaVG Blue
60 reg settings
AIO Network. Setting Pack
Adobe Flash AIO
Foxit Reader 2.3.3309
Original SNN 2.5
Reapers 1.48 CPUZ
အပိုင်း (1) ၊ အပိုင်း (2) ၊ အပိုင်း (3)
Posted by ဧရာညီနောင် at 1:47 PM